Lenovo Z6 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုယခုတရားဝင်ကြေညာလိုက်သည် Androidsis
Lenovo Z6 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကိုရွေးချယ်ရမည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည် ပစ်၏Lenovo Z6 ဌ, အကြားဖြစ်စျေးကွက် hit လိမ့်မည်ဟုပျမ်းမျှမူကွဲ Z6 Pro y Z6 လူငယ် Edition ကိုအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
ကျနော်တို့လာမယ့်နေ့ကနေနှစ်ရက်သာကွာပါတယ်။ သို့သော်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ပရိသတ်များအားစောင့်ဆိုင်းနေရန်မလိုတော့ဘဲထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ဒီစမတ်ဖုန်းအားလုံးတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များ. အဘယ်အရာကိုသိရန်လိုပါသလား?
တရား ၀ င်ပိုစတာမှတဆင့်၊ ကုမ္ပဏီသည်အထက်ဖော်ပြပါအလယ်အလတ်တန်းစားများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်များအရ Lenovo Z6 သည် HDI10 အသိအမှတ်ပြု display ကို DCI-P3 နှင့် sRGB အရောင်အရောင်အသွေးစုံလင်သော HDR120 တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်နမူနာအကြိမ်ရေ 6,39Hz ရှိသဖြင့်ဂိမ်းကစားသည့်အချိန်ကနည်းပါးသည်။ ၎င်းသည် De-Mura မျက်နှာပြင်အရောင်တောက်ပမှုနည်းပညာနှင့် Gorilla Glass အဖုများနှင့်ခြစ်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် OLED နည်းပညာဖြစ်ပြီး ၆.၃၉ လက်မရှိပြီးစမတ်ဖုန်း၏ကိုယ်ထည်၏ ၉၃.၁% ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
Lenovo Z6 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Launch မတိုင်မီထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, device ကိုအားဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ် Snapdragon 730 ရှစ်ခု၊ Adreno 618 GPU နှင့် 8 GB RAM တို့ပါရှိသည်။ ၎င်းအပြင်သိုလှောင်မှုပမာဏ 128 GB ရှိပြီး 512 GB အထိ microSD ကဒ်ပြားဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး 4,000 mAh ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားပြီးလျင်မြန်စွာအားသွင်းရန် 3.0 watts အားလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Android Pie အောက်ရှိ ZUI 11 interface ကိုမိုဘိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဒီတစ်ခု Turbo ဂိမ်း mode ကိုနေစဉ်, ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်တွင် 576-megapixel (f / 24) Sony IMX1.8 အာရုံခံကိရိယာ၊ 8-megapixel telephoto မှန်ဘီလူး 2x optical zoom နှင့် 8x hybrid zoom နှင့်နောက်ဖက်တွင် 5-megapixel wide-angle sensor ရှိသည်။
Lenovo Z5 Pro ၏ 6G ဗားရှင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါ။ ယင်းတို့ကိုဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့တွင်စတင်မိတ်ဆက်သည့်နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့အခြားအပိုအသေးစိတ်များလည်းထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Lenovo Z6 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်